Zikhona izindlela umzali angavikela ngazo ingane emkhuhlaneni
ZAMA ukuvikela ingane yakho ingangenwa kalula umkhuhlane ngesikhathi samakhaza Isithombe: UMFC
UKUSHINTSHA kwesizini kungena isikhathi samakhaza kulo nyaka, akuzofana neminye iminyaka njengoba umhlaba wonke ubhekene nokubhebhetheka kweCovid-19.
Nokuvulwa kwezikole nakho kwengeza usawoti esilondeni njengoba kuzoba nzima kumzali ukwamukele ukuthi ingane enhlinhlizayo yingoba iziphathelwe wumkhuhlane ojwayelekile obuvele uzoyibamba, noma ngabe isiphethwe yilona yini ubhubhane.
Odokotela bathi yize kunalo mkhuhlane obulalayo, kodwa imikhuhlane ejwayelekile isazoqhubeka ibonakale nasezingane njengokwejwayelekile ngalesi sikhathi samakhaza.
Bathi okuzobaluleka wukuthi abazali banze izaba zokuthi umkhuhlane ojwayelekile ungayitholi indawo. Lokhu ungakwenza ngokuthi uqinise amasosha omzimba enganeni ngalesi sikhathi noma ukwazi ukubona uma umkhuhlane unyonyoba enganeni usheshe uqunqande.
Ezinye zezinto ongazenza zikusize
-Uma kukhona ekhaya osekubonakala ukuthi unomkhuhlane, akangasondelani ezinganeni futhi angalali lapho kulala khona iizingane.
-Hambisa ingane emtholampilo noma kudokotela iyogomela umkhuhlane ukuze ingaguli kalula.Kuthi noma ibanjwa wumkhuhlane, usheshe uyidedele.
-Ayihlale ihlanzekile ingane noma ngabe seyikhombisile izimpawu zokukhwehlela. Jwayeza ingane yakho ukuthi ihlale igeza izandla ngensipho.
-Uma ingane seyingenwe umkhuhlane, qinisekisa ukuthi uyayinakekela ingathimuli noma kanjani kusabalale namagciwane. Ifundise indlela yokuthimula neyokukhwehlela ezovikela nabanye.
-Hlala unezibulali magciwane ufuthe nasendlini ukubulala amagciwane okungenzeka abe khona.
Ngaphandle kwakho konke, ikhona imithi etholakala emakhemisi esiza ukuqinisa amasosha omzimba izingane ezingayisebenzisa noma zingenamkhuhlane. Ukuqinisa ekudleni nasezithelweni ezinoVitamin C ngalesi sikhathi nakho kubalulekile.
Kungakusiza ukuthi ungasali umtsholwane wamawolintshi uma uyothenga igilosa ngalesi sikhathi ukuqinisekisa ukuthi izingane zakho ziyawuthola uVitamin C.Nokuzithengela kakhulu oswidi nezicoficofi kwehlise ngalesi sikhathi, uqinise ezithelweni.